BUDDHIST TERMS' Dictionary: FOUR ARIYA TRUTHS - စတုသစ္စ
FOUR ARIYA TRUTHS - စတုသစ္စ
FOUR ARIYA TRUTHS Catusacca
စတုသစ္စ - အရိယာသစ္စာလေးပါး။
အရိယာတို့ သိအပ်သော သစ္စာလေးပါးကား -
(၁) ဒုက္ခသစ္စာ - ခန္ဓာငါးပါးသည် ဆင်းရဲခြင်းသာတည်း၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ပြင်းစွာ နှလုံးမသာမယာခြင်းတို့သည် ဒုက္ခသစ္စာ မည်၏။
(၂) သမုဒယသစ္စာ - ခန္ဓာကိုယ်ကို တွယ်တာမှုသည် ဆင်းရဲကြောင်း သမုဒယသစ္စာ မည်၏။
(၃) နိရောဓသစ္စာ - တဏှာချုပ်ငြိမ်းမှုသည် ဆင်းရဲငြိမ်းမှု နိရောဓသစ္စာ မည်၏။
(၄) မဂ္ဂသစ္စာ - ဆင်းရဲငြိမ်းကြောင်းဖြစ်သော မဂ်ဥာဏ်သည် မဂ္ဂသစ္စာ မည်၏။
The four Ariya Truths realized by the Noble Ones, Ariyas, are:
1. The Ariya Truth of Dukkha, Dukkha Saccᾱ. The five aggregates, khandhas, are indeed dukkha. Birth, ageing and death and also grief, lamentation, pain, distress and despair are called the Truth of Dukkha, Dukkha Saccᾱ.
2. The Ariya Truth of the Origin of Dukkha, Samudaya Saccᾱ. The Craving for the aggregates is the origin of Dukkha and is called Samudaya Saccᾱ.
3. The Ariya Trugh of the Cessation of Dukkha, Nirodha Saccᾱ. The extinction of Craving is the extinction of Dukkha, and is called Nirodha Saccᾱ.
4. The Ariya Trugh of the Practice leading to the cessation of Dukkha, Magga Saccᾱ. Insight Knowledge, Magga Saccᾱ, which eradicates all suffering, Dukkha, is known as Magga Saccᾱ.